Somali News 06.16.21 | KWIT
Somali News 06.16.21
Iowa. Gudoomiye Kim Reynolds wuxuu saxiixay sharciga biilka canshuuraha oo looga baahan yahay gobolka inay la wareegto maalgelinta adeegyada daryeelka caafimaadka maskaxda, iyadoo laga saarayo canshuuraha guryaha maxalliga ah.
Qiyaasta oo sharci noqotay Arbacadii waxay sidoo kale waji gabaysaa cashuurta dhaxalka gobolka sanadka 2025 waxayna u ogolaaneysaa dhimista canshuuraha dakhliga ee la ansixiyay seddex sano ka hor in la bilaabo Janaayo 2023.
Golaha Magaalada Koonfurta Sioux ayaa ansixiyay bixinta nus malyuun doolar si ay uxalliyaan qaybtooda 16 dacwadood oo laga gudbiyay magaalada iyo warshad hadda shaqaysa oo biogas ah.
Dacwadda ay soo gudbiyeen milkiileyaasha guryuhu waxay ku eedeeyeen warshaddu inay u dirto qiiqa qulqulaya nidaamka bullaacadaha magaalada oo ay dumiso guryahooda.
Dejinta ayaa ku baaqeysa in magaalada, Big Ox Energy, saddex shirkadood oo caymis ah iyo laba shirkadood oo kale ay bixiyaan wadar ahaan 1.75 milyan oo doolar.
Big Ox wuxuu bilaabay howlihiisa bishii Sebtember 2016, kala soocida adag ee biyaha wasakhda warshadaha si loo abuuro loona iibiyo methane. Waxaa loo soo qaatay xadgudubyo badan oo xagga deegaanka ah illaa ay ka xirmayso 2019.
Saraakiisha caafimaadka ee waqooyi-bari Nebraska waxay ogaadeen culeys cusub oo ah COVID-19. Kala duwanaanshaha Delta wuxuu ka yimid Hindida waxaana la rumeysan yahay inuu si fudud ugu faafo.
Nebraska ayaa soo socota iyada oo 70% dadkeeda qaangaarka ah laga talaalay coronavirus laakiin xawliga ay u socoto qaybinta talaalada ayaa hoos u dhacaya. CDC-da ayaa sheegtay in qiyaastii 63% ee Nebraskans 18 iyo wixii ka weyn ay heleen ugu yaraan hal talaal ilaa Jimcihii. Heerkaasi wuxuu ku jiraa kaalinta 24aad dhammaan gobollada.
Saraakiisha caafimaadka ee South Dakota ayaa ka digay in kasta oo kiisaska coronavirus ay hoos ugu sii dhacayaan heerarka ugu hooseeya tan iyo maalmihii ugu horreeyay ee safka safka, haddana gobolku wuxuu arki karaa dib u soo noqoshada fayraska xilliga dayrta haddii aan dad ku filan la tallaalin.
Magaalada Sioux City waxay dadka ka codsaneysaa inay caawiyaan dadka hoy la’aanta ah iyagoo ugu deeqaya magaalada oo dhan macaash doon, halkii ay ka siin lahaayeen shaqsiyaadka. Magaalada ayaa saaka ku dhawaaqday inay dadka ka caawin doonto inay wax siiso si ay isbeddel dhab ah u sameeyaan markay wax ugu deeqaan degel cusub. Deeqaha waxaa lagu sameyn karaa www.siouxcityassist.org. Lacagta waxaa la siinayaa hay'adaha bixiya adeegyada iyo / ama hoyga.